» बृतामोड गाउँले होटलका मालिक चारआली जङ्गलमा मृत फेला,बिचरा! आमा/छोरी रुदारुदै बेहोस, भुइँमा ढलिन, घटनाको भित्री रहस्य खुल्यो,,,,,(भिडियो सहित) बृतामोड गाउँले होटलका मालिक चारआली जङ्गलमा मृत फेला,बिचरा! आमा/छोरी रुदारुदै बेहोस, भुइँमा ढलिन, घटनाको भित्री रहस्य खुल्यो,,,,,(भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
बृतामोड गाउँले होटलका मालिक चारआली जङ्गलमा मृत फेला,बिचरा! आमा/छोरी रुदारुदै बेहोस, भुइँमा ढलिन, घटनाको भित्री रहस्य खुल्यो,,,,,(भिडियो सहित)
काठमाडौं ।बिर्तामोडको गाउँले होटलका स’ञ्चालक तिलक निरौला चारआली जंगलमा मृ’त अवस्थामा फे’ला परेका छन । त्यससंगै जङ्गलमा एकाएक मानिसहरुको भिड बढेर प्रहरीलाई समेत अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको थियो । रह’स्यमय मृ’त्यु भएका तिलक बिर्तामोड मन’मोहन हस्पिटल छेउमा रहेको गाउँले होटल संचालन गर्थे
। छिमेकीहरुका अनुसार सारै मिलनसार उनी सबैका प्यारा थिए । कसैले नसोचेको भयो भन्दै धेरै चिन्तामा देखिन्थे उपस्थित सबै । तिलक निरौला मोटरसाइ’कलसहित २ दिनअघि देखी बेपत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा सूचनाको रुपमा आएको थियो । खोजी कार्य तिब्र रुपमा गरेको परि’वारले कतै भेट्न सकेन । उनको बारेमा मे. ९ प २२०९ नम्ब’रको साइ’न मोटरसा’इकलसहित निरौला बेपत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको थियो ।
चारैतिर चर्चा चलेको थियो । बि’र्तामोड-५ बस्ने निरौलाको शव जंगलमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । लाश जंगलभित्र रहेको र ह त्या भए नभएको बारे’मा अनुसन्धान गर्न प्रहरी टोली कुकुर सहित घटनास्थल पुगिसकेको र प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत सुरु भइसकेको जि’ल्ला प्रहरी कार्यालय झा’पाले जनाएको छ । घटनास्थलमा पुगेर प्रह’रीले घट’नाबारे थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
शब पोस्टमार्टमका लागि पठाइसकेर तिब्र गतिमा अनुसन्धान गरिदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आ’ज घ’टनास्थल पछि गाउँले होटलमा पुगेर तिलककि श्रीमती आमा र छोरीसंग कुराकानी गरिएको छ । उनिहरुले रुदै यस्तोसम्म सुनाए कि त्यहा उपस्थित सबैजनाको रुवाबासी नै च’ल्यो । आमाले बोलेका हरेक शब्दले सबैको मन छोयो । श्रीमतीलाई हि’ड्नुअघि फोनमा यस्तोसम्म भनेका रहेछन । श्रीमती र छोरिले रुदै खो’ले सुरुदेखिको कसैले नसोचेको डर’लाग्दो भित्री रह’स्य र नालीबेली